Mamakia Finaritra | Jolay 2020
Faly indray tafaverina eto raha t@ herintaona no nanoratra tononkalo farany. Tsy hita moa izy ity fa sahirana amin'ny fitaizana sy ny fitadiavana dia tsy dia nanam-potoana loatra nitodihana tato amin'ny bilaogy. Ankehitriny efa azo lazaina tsy dia taiza be intsony ny faravavy dia mba afaka manararaotra manoratra sy miverina amin'ny fanoratana tononkalo, bilaogy sy ny sisa hafa, na dia voahelingelina kely ihany aza indraindray.
Amin'izao vanin'andro ianantsika izao dia tsy dia fahita firy intsony izany hoe mpivady miteraka betsaka izany, tsy tahaka ny andro fahiny izay toa miteraka maro ny mpivady. Matetika ireo tsy nandia fianarana na ireo 4-mi no tena lazaina fa manao tera-bitro tsy mahay momba ny fanabeazana aizana rehefa maro ny zanany. Tsy hay aloha fa samy manana ny fijeriny sy fiheviny ny tsirairay.
Ho an'ny ankamaroan'ny mpivady, dia zaza 1 na 2 dia efa ampy, raha mihoatra ny 3 dia efa betsaka. Safidin'ny mpivady izay ho ataony ho isan-janany ka na firy na firy no eo, inona moa no hidirako? Sa ahoana :) Samy manana ny safidiny sy ny lalana efa nomanin'Andriamanitra ny tsirairay. Izahay mivady izao nikasa hanan-janaka 3 fa mbola niampy 2. Ekena sy ankasitrahana izay nomen-Janahary.
Fa tsy mora tokoa izany hoe niteraka in-4 nisesy, 2 taona avy ny elanelana ary 1 taona ny elanelana amin'ireo faravavy sy faralahy, ny vavimatoa moa efa lehibe fa ireo zandriny 4 no mbola kely daholo. Saingy mirehareha aho nahavita an'izay dingana izay na dia tsy maintsy hoe reraka ihany aza ary misy fiantrakany amin'ny fahasalamana. Tsy lavina tokoa fa tsy mora ny mitaiza ankizy mihoatra ny 1, zaza iray aza moa efa manahirana koa maika fa 5 be izao. Fa vita foana io ee, lehibe foana ireo ee, hoy ny sasany.
Fa izaho manokana dia mahatsiaro feno fitahiana manan-janaka 5 ary tena faly sy tiako be indrindra rehefa mahita azy ireo miara-milalao. Lasa ny saiko indraindray hoe, tsy nampoiziko hanan-janaka 5 tahaka izao aho, mahafinaritra ery izy ireo. Izy ireo no tena anisan'ny antony hiasanao mafy sy hikelezanao aina. Tena korana be foana ato an-trano amin'ny tabataban'izy ireo, tsy lazaina intsony ny korontana eran'ny trano, ny filalaovana vovoka any an-tokontany, sns. Fa tsy maintsy zakaina ny tabataba sy ny korontana ataon'ny ankizy raha tsy te harary sy ho antitra vetivety isika ray aman-dreny. Ampianarina fotsiny izy ireo hampirina rehefa avy manakorontana.
Mamenoa ny tany hoy ny voalazan'ny baiboly, fahasoavana daholo izany ee, ny tsy manana aza efa tsy fidiny, sambatra be indry rehefa lehibe ireo ee, harena be ny zanaka ee, sns. Ohatra amin'ireo teny fampaherezana azo avy amin'ny olona mahita anao manan-janaka betsaka. Ary tsy lavina fa marina avokoa ireo ary enga anie mba ho toy izany mihitsy ee.
Mirary soa ho anao mpamaky manokana maniry hanan-janaka mba hotanterahan'Andriamanitra ny fikasanao. Mirary soa ho antsika ray aman-dreny rehetra fa tsy mora ny mitaiza indrindra raha te hanana izany hoe zanaka ho tafita, ho olom-banona sy olona matahotra an'Andriamanitra izany.